Xumaan Doone; Xabashina la Diid; Shariif Xasanna Xurmo Hel
Gabyaagii Dharbaaxo-jaan Allaha u naxariistee wuxuu SSDF iyo qabiilkii ugu badnaa ka yiri:
Gaagaabsha oo yaan la bixin gaalo-waranleyda!
Gabyaagu wuxuu heystay korneyl C/hi iyo qabiilkiisii dagaalka u aaday Itoobiya. Maaddaama gabyaagii SSDF (Khaliif Sh. Maxamuud Allaha u naxaristo) uu si toos ah Xabashi iskaga fogeeyey ayaanan marna niyadda gashan in la arki doono qof Soomaaliyeed oo aamminsan in Xabashi kheyr la rabto. Waxay iigu darneyd markii 1997-dii magaalada London uu nin aqoonyahan lagu sheego oo ka soo jeeda “Puntland” igu yiri: waxaan jeclaanlahaa in Kismaayo iyo Puntland aan ku darsanno Itoobiya! Inta askari ooy ninkaas qaraabo ahaayeen oo ku dhimatay dagaalkii 1977-kii lama xisaabin karo. Maalintaas laga soo bilaabo waxaan gartay in dadka Soomaaliyeed u baahanyihiin wacyi-gelin.
Oraahda Dharbaaxo-jaan, waxaa ka turjumay weraysiyo ay BBC-da Laanteeda Afsoomaaligu ka qaaday dadweyne ku nool qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed ka dib farofootankii iyo gacan-ka-hadalkii dhexmaray xubnaha baarlamaanka. Dadkii Axmed Kismaayo, weriyaha BBC-da ee Puntland, ka qaaday wereysigaas magaalada Garoowe (intii idaacadda BBC-du sii deysay barnaamijkeedii galabtaas) waxay dhammaantood aamminsanaayeen in ciidamo Itoobiya u dhashay la keeno Soomaaliya. Waxay hadalka u dhaheen: yaan loo kala saarin saf hore iyo saf dambe midna. Galabtaas waxaan iri “Ilaahoow reer tolkey u naxariiso, caqli ma lahee”. Waxaa iga yaabiyey magaalooyinkii kale oon is lahaa waxay idiin ka faro dhuudhuubanyihiin Itoobiya, oo shacabkii joogey qaarkood ay mucaaradeen keenidda ciidamo Itoobiya ka socda. Magaalada Baladweyne, hal qof maahee, dadka intiisii kale waxay diideen in ciidamo ka socda Itoobiya la keeno Soomaaliya. Magaalada Baydhabo, 4 qof baa tiri hala keeno ciidamo ka socda safka hore halka 3 kalana ay dhaheen yaan la keenin weliba iyagoo xusay dhibtey Itoobiya u geysatay Soomaaliya ama ay haddaba ku heyso. Waxaa Garoowe cagsigeeda noqday dadkii lagu wareystay Marka oo dhammaantood diiday in ciidamo Itoobiya ka socda Soomaaliya la keeno. Waxaanan dhegeysan ra’yigay ka dhiibteen arrintaas dadweynaha Soomaaliyeed ee jooga Hargeysa iyo Nairobi oon filayo inay i dhaaftay ama ay ku sheegeen tii 11:00 barqanimo ama ay u dib dhigeen tii habaynkii ee maalintaas.
Hadalka Garoowe ka soo yeeray, waxaa dheer, in Boosaaso lagu qabtay bannaanbax looga soo horjeedo go’aankii inta badan xubnaha baarlamaanku gaareen. Dadka isu soo baxay waxay sheegeen inay taageersanyihiin Geeddi! Lama yaabbani guulwadayaasha soo abaabuley bannaanbaxaas ee waxaan la yaabay, meeye raggii qabay dumarkaas? Meeye raggii dhalay carruurtaas sidii xoolihii la isku soo dumay?
Imisey le’egyihiin dadka ay reer Puntland isku qabiilka yihiin ee Itoobiya hoos jooga? Laga soo bilaabo Wardheer ilaa Gaalkacyo, Garoowe, Buuhoodle agtooda waxaa daadsan dad ay dadka Puntland dhalasho wadaagaan. Waxay Itoobiya u qabanweydey dadka hoos jooga miyey reer Garoowe iyo reer Boosaaso u qaban? Rumeyso ama ha rumeysan, waxaa isku laayey dhulkaas aan sheegayo labo qabiil oo ka soo jeeda Puntland 1995. Waxaa la isku isticmaalay hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaa ku dhintay boqolaal nin oo ilmo adeer, ilmo abti, ilmo eedo, xidid iyo abtiyaal isu wada ah. Ogoow hadde markaas Zenawi waa joogee! Qabiil dhan baa laga soo qaxiyey dhulkaas oo soo galay Soomaaliya oon dowlad lahayn! Waxaa intaas dheer ma jirto wax haba yaraatee ay Itoobiya ka qabatay dagaalkaas. Xitaa hal qof ama nabaddoon lama xirin! Islaan Maxamed Allaha u naxariistee oo oday ka ahaa magaaladaas, dadkii joogay qaarkood leeyihiin Itoobiya hala keeno, wuxuu ku jiray odayaashii isku deyey wax-ka-qabadkii dagaalkaas. Fiiri, Islaankaa wax isku deyey halka aan Zenawi far dhaqaajin. Boowe mala tahay reer Garoowe iyo Reer Bari in Zenawi uu C/hi Yuusuf iyo Muuse Suudi kala jecelyahay?
Ragga Soomaaliyeed baa dumarka ku caayi jiray inay xasuus daranyihiin ooysan ka dhiidhiyin wixii soo gaara ama lagu falo. Waxaas waxaa isku fuuqsaday oo beeniyey Xildhibaanad Caasha Axmed Cabdalla oo u dagaalameysay inaan Xabashi la keenin Soomaaliya halka 55 xildhibaan oo niman u badan ay rabeen in Xabashi la keeno. Hadda xildhibaanad Caasha waxay rafcaan ka qaadaneysaa gabayadii ka soo yeeray labo nin ooy isku qolo ka soo jeedaan. Waa Cali-dhuux Aadan iyo Khaliif Sheekh Maxamuud. Cali-dhuux wuxuu yiri:
Naagahaan dhankii loo dhigiyo dhinacna diideyne
Dheddiggoonshahaa lagu arkiyo dhiigga caadada e’
Haddaysan dhiilka caanaha lahayn laguma dhaarteene
Wax ka dhigan gobtii dhowrsatoon ceeb ka dhiidhiyine.
Gabar caalim kuu meheriyey waa inaad caruustaaye
Inay cayshka kuu soo dhigtiyo gogol cas mooyaane
Codkar lamaga dhowriyo haween geesi caan baxaye.
Oo Cali-dhuux iyo Khaliif Allaha labadaba u naxariistee maxay ku oran lahaayeen xildhibaannada 55-ta gaaray ee Xabashida raba?
Waxaa jiray nin ganacsade ahaa oo dadka ku khiyaami jiray kafadaha iyo miisaanka isagoo markuu alaab wareegsanayo ama dadka ku wareejinayaba ku khiyaama. Maalintii dambaa lacag laga xaday markaasaa dad ku dhaheen iska samir waxaa laguu saaridoonaa miisaankaaga aakhiree! Ninkii wuxuu yiri “ minal miizaani suriqat” oo ah ma jiro ajar la ii saaridoono miisaanka aakhiro maxaa yeelay lacagta lafteedaanba ku xaday miisaan! Maalintii dhoweyd, waxaa baroordiiq joogay Geeddi oo yiri: maalin madow baa Soomaali u soo hoyatey. Waxaa dhici karta in Geeddi isagoo booyaya uu korneylka u tegey dabadeedna korneylku ku yiri: Geeddi is deji oo ha oran wixii baarlamaanku gaaray waa wax-kama-jiraan; miyaadan ogeyn in baarlamaankaasi uu madaxweyne iga dhigay? Hadda wakaas korneylka laga sheegayo isagoo leh waa in labada gole heshiiyaan ilayn sida Geeddi ma dhihi karo baarlamaanku waa khaldameene. Waxaa la sheegayaa in korneylku si hoose u damcay in labada guddoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka uu ku qalqaaliyo inay soo saaraan hadal ay ku burinayaan kii Shariif Xasan laakiin waxaa la leeyahay waa diideen. Xitaa hadday isku deyi lahaayeen waxay raaci lahaayeen 55-ta Xabashi-raac.
Haddaan xildhibaan Xirsi Bulxan oo ugu da’ weyn xubnaha baarlamaanka kana soo jeeda Garoowe uusan dhaheen Xabashi lama keeni karo Soomaaliya, waxay noqon lahayd in si toos ah loo dacaayadeeyo reer Garoowe iyo reer Boosaaso. Marka madaxa Xirsi Bulxan aan ku deyno.
Gobolada Banaadir, Shabeelaha Hoose iyo Jubbooyinku waxay dhegeystaan idaacado dadka xasuusiya xumaanta Itoobiya la rabto Soomaaliya halka kuwa ka jira Puntland ay la midyihiin Radiyow Muqdisho. Maaddaama ay dadkaasi ka soo jeedaan mucaaradkii hubeysnaa ee ugu horreeyey ee la dagaala Kacaanka, maxay hadda ugu dhaqmayaan sidii dad madaxa looga taaganyahay oon xor ahayn?
Weligiin yaa arkay Yuhuud, Hilter ama Jarmalka ammaaneysa ileyn reer Puntland, Xabashi, wanaag ka sugeysa aragnee? Yuhuuddu waxay xadka ka saareen arrintii dadkoodii ay laayeen Naasigii Jarmalka. Waxay gaareen heer ay qof kasta sanka ka geliyaan. Wixii maaliyiin Afrikaan ah badweynta Atlaantik lagu guray, wixii intaas oo waddan la addoonsaday lana dilay boqolaal Malyan oo dunida seddexaad ah; wixii malaayiin qof ku dhintay dagaaladii 1-aad iyo 2-aad haddana waxaan dilkii Yuhuudda ahayn ma maqleysid. Inkastoo Yuhuuddu aysan muslim ahayn haddana waa dad fidrada ku taagan oo aan iloowin wixii loo geystay. Micnuhu waa: Yuhuuddu ma ahan “umulo”. Dumarku raali ha ahaadeen waxaan u danleeyahay xildhibaannada Xabashi-raaca ah iyo dadka reer Puntland ee aamminsan in Xabashi la keeno. Ogoow dad badan oo reer Puntland ah baa Xabashi diidan laakiin marba hadday aamuseen micno samayn meyso.
Waagaan dhallaanka ahayn baan oran jirnay markii nin Xabashi ahi dhinto waxay qabriga la gashaan qori iyagoo leh “Waaq” iskaga celi. Waa Ilaah iskaga celi. Yuhuuddana waxaan ka sheegi jirnay inay carruurtooda ku ababiyaan nacaybka nabiga (SCW). Laakiin waxaa hadda iga yaabiyey markii Yuhuuddu ay magaalada Quddus ka fureen matxaf loogu talogalay in lagu xusuusto dilkii Naasigii Jarmalku ku faleen dadkooda. Waxay rabaan inay weligood colaaddaas ku hayaan maanka iyo wadnaha. Halka korneylka iyo wax-ma-garato iska dabogashay ay har iyo habeyn nagu dhahaan, Itoobiya tii hore maaha! Jarmalkoon aragnay meeshuu ka gaaray dimuqraadiyadda, ayaan marna Yuhuudda ka maqal iyagoo leh Jarmalku kii hore maaha.
Muslim iyo gaalaba, dadka dalkooda iyo qaddiyadooda u dagaalama waxaa lagu maamuusaa sharaf tan ugu weyn. Mar haddaad maqashid saxaabigaasi Badar buu ku dhintay ama xaadiray waa sharaf weyn. Wuxuu ka isyaaneysanyahay kuwa ku dhintay dagaaladii ka dambeeyey ama xaadiray haddaysan awal Badar xaadirin. Maalmahan waxaan ka arkeynay wiil madow oo ku jira ciidamada Ingiriiska kuna dhashay jasiiradahaas Ameerika oo labo jeer lagu dhaawacay Ciraaq in la siiyey bilad heer sare ah oo ku sheegeen “Victoria Cross”. Ogoow ciidamada Ingiriisku markii horaba sharci-darro bey Ciraaq ku galeen haddana waxay ku faraxsanyihiin sidii wiilkaas madoow uu ciidankiisii uga badbaadshay in dhib intaas ka badan soo gaarto.
Soomaalidii hore waxay xagga fidrada isku raaceen Yuhuudda. Intaysan Yuhuuddu matxafkaaska dhisin Quddus, innagaa dhisney xero loo yaqaan Xalane. Maxaa xerada Xalane loo dhisay? Haddaan su’aashaas u bandhigo Maxamed-dheere, Xuseen Caydiid, Cali C/hi Cosoble iyo Gacmo-dheere, maxay ku jawaabin? Qasadka magacaas wuxuu ahaa in dadka Soomaaliyeed ogaadaan inay jirto dowlad Itoobiya la dhaho oo marka ay fursad u hesho rabta iney Soomaaliya qabsato. Si aysan Soomaalidu u iloowin taariikhdaas waxaa naloo sheegayaa inuu jiray geesi Soomaaliyeed oo naftiisa u huray ineysan Xabashi u gudbin hooyooyinka iyo gabdhaha Soomaaliyeed. Ogoow xeradaas waxaa lagu xarayn jiray dadka laga sugayo meekhaan sare sida macalimiinta, kaadiriyiintii Kacaanka iyo ciidanka Soomaaliyeed si ay maanka ugu hayaan cadowga iyo cadow-raaca Soomaaliyeed. Haddii xeradaas lagu xareeyo ciidan Xabashi ah waxay ka dhigantahay Yuhuudda oo matxafkaas Qudus ku yaal ku ammaanta Hilter.
Maxamed Cumar Dage Allaha u naxariistee waxaa laga sheegay;
Daka kale ha joogee warkaas Cali dareensiiya
Deel-qaafku waa ba’anyahee daacad ugu sheega
Hadda waxaan arrintaas matxafkaas iyo xerada Xalane xasuusinayaa dad aqoonyahanno sheegtay oo qaarkood magacyadooda laga hormariyey “professor & Doctor” iyagoo leh: xubnaha baarlamaanku ha u codeeyeen in Xabashi waddanka la keeno. Waxaa aqoon u baas lahaadey aqoonta dadkaasi leeyihiin! Soomaalidu waxay tiraahdaa: xoog maahan kan xargaha kaa jara. Sidoo kale aqoon maahan midda waddankaaga kusoo hogaamisa cadowgaaga.
Waxaa jiray labo wiil oo walaalo ahaa oo doqommo ahaa. Waxaa loo sameeyey labo qool oo mid walba uu isku garto midkuu yahay. Maalintii dambe ayaa labadii qool si uun ugu kala badelmeen labadii wiil. Mid baa yiri: walaale, adigu waxaad tahay aniga ee yaan anigu ahay?! Wuxuu arkey qoolkii uu xirnaan jiray oo walaalkiis xiranyahay markaasuu hadalkaas kore yiri! Hadda wax faraq ah oo u dhaxeeya mucaaradkii Puntland (GBP) iyo korneyl C/hi ma leh. Korneyl C/hi iyo wasiirradiisu waxay oran jireen: Xabashidu kuwii hore maahan. Haddeer oo la joogo Cadde Muuse iyo wasiirka horumarinta reer miyigu waxay qabaan in aysan Xabashidu tii hore ahayn. Marka qoolalkii baa ukala badelmee ma jiraan wax soo kordhey.
Waxaan dadka reer Puntland kula talinlahaa iney akhlaaqda iyo anshaxa ilaaliyaan ee aan mar dambe laga maqal Xabashi hala keeno ama tii hore maahan. Sidoo kale raggu dumarkooda iyo carruurtooda ha ceshado.
Ugu dambeyntii waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa dhammaan xildhibaannadii u codeeyey inaan Xabashi la keenin. Waxaa sharafta inteeda badan la dheelmanaya afhayeenka Baarlamaanka Shariif Xasan iyo inta aan dagaal-oogayaasha ahayn. Markey joogto qaddiyada Xabashida, dagaal-oogaha diiday Xabashida wuxuu ka helaya sumcad; waxaana la rabaa inuu kaga faa’iideysto wuxuu horay ugu falay shacabka Soomaaliyeed. Waxaa laga rabaa inuu ka toobad keeno wixii hore una soo jeesto inay dhibtii ay geysteen ku bedelaan wanaag. Laakiin dagaal-oogayaasha Xabashida raba waxaa usoo kordhey mugdi iyo hoog. Hadday saas ku dhintaanna waa khaatumo xumo.